Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanno ka tirsan Jubbada Hoose – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanno ka tirsan Jubbada Hoose
By admin on 30/09/2018 No Comment
Axadd, Sep, 30, 2018(HNN) Ciidanka Xoogga Dalka Soomaliyeed oo kaashanaya kuwa Darwiishta Jubbaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen Gobolka Jubbada Hoose kula wareegay deegaano hoostaga degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayeen Maleeshiyada Al-Shabaab.
Howl-galadan ayaa la sheegay in ay bilowdeen saaka aroortii hore kadib marii ciidamadu weerar qorsheysan ay ku qaadeen ldeegaanna ku teedsan degmada Jamaame, iyagoo gacanta ku dhigey dhammaan deegannada hoos yimada degmadaasi.
Deeganada ay ciidamadu la wareegen waxaa kamid ah Bangiini,maana muufo iyo koban oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Generaal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo ah lataliyaha madaxweynaha Jubbaland ee dhanka ammaanka ayaa sharaxad ka bixiyay howlgalada ciidamadu ay ka fuliyeen deegaanadaasi.
“Hadda maanta koban baa la joogaa ciidanku Baar-sanguuni wuu ka tagay,howlgalkaasi gurmadkiisa iyo u diyaargarowgiisi iyo ciidankii horaydaasi jiro haday wax soo gaaraan u gurmashadooda ka mid bay ahayd,hadana wax qasaare ah 2 will oo dhaawac ayaa naloo sheegay,iyagana 5 qof ayaa laga dilay mooto ay wateena waa laga qabsaday,hoobiyaal in ay soo ridayeen baa la ii sheegay”. Ayuu yiri Yuusuf Dhuumal.
Malleeshiyaadka Al-shabaab ayaa la sheegaya in Gabi ahaanba iskaga baxeen degmada Jamaame kadib markii ciidamadu ay labo jibareen weeradada ka dhanka ah al shabaab tasoo keentay in ay iskaga baxaan guud ahaan degmada jamaame iyo tuulooyinka hoostaga
Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanno ka tirsan Jubbada Hoose added by admin on 30/09/2018